News | Tag: football
कुन सेलिब्रिटीको बेस्ट फुटबल क्लब कुन !
केही यस्ता सेलिब्रिटीहरु छन् जसलाई फुटबल खेल एकदमै मनपर्छ । उनीहरु खुलेर उक्त फुटबल क्लबको समर्थन गर्ने गर्छन् । चर्चीत सेलिब्रिटीहरले बेलाबेला उक्त फुटबल क्लबको फुटबल हेर्न स्टेडियममा नै आउँने गर्छन् ।
यी फुटबल स्टारहरुको कति छ सम्पत्ति
फुटबल खेलबाट पनि करोडौँ कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्टार खेलाडीहरुले प्रमाणित गरेका छन् । विश्वको सबैभन्दा चर्चित खेल फुटबलका कारण धेरै खेलाडीहरुको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको छ ।
साफ यु-१८ फुटबल च्याम्पियसिप नेपालमा हुने
काठमाडौँ । दक्षिण एशियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) यु–१८ फुटबल च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ ।
साफ खेल्ने महिला टाेलीलाई एन्फाले जनही १ लाख दिने
विराटनगर । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले पाँचौ साफ फुटबल प्रतियोगिता खेल्ने प्रत्येक खेलाडीलाई रु. एक लाख नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालले गाेल फर्काएपछि खेल बराबरीमा
काठमाडौँ । विराटनगरमा जारी पाचौँ साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले गोल फर्काएको छ ।
साफ फाइनल जिते महिला टाेलीलाई जनही दुई लाख दिने घाेषणा
विराटनगर । नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको पाँचौ महिला साफ फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल समूहले बिजयी प्राप्त गरेमा प्रदेश नं १ सरकारले जनही रु. दुई लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौँ । आजदेखि भारतको गुहावटीमा शुरु भएको डा ता आओ सेन्टेनरी नर्थ इस्ट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले बुधबार पहिलो खेल भारतको मेघालयसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने भएको छ ।
ओलम्पिक छनाेटकाे खेल तालिका सार्वजनिक, नेपाल र भारत एउटै समूहमा
काठमाडौँ । सन् २०२० मा जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया दोस्रो चरणको छनोटका लागि खेलतालिका सार्वजनिक भएको छ ।
शहीद स्मृतिकप फुटबल फागुन १ गतेदेखि
रुपन्देही । शहीद स्मृति खेलकूद क्लबको आयोजना तथा मदन भण्डारी स्र्पोट्स एकेडेमीको सहकार्यमा बुटवलमा चौथो शहीद स्मृतिकप खुला नकआउट फुटबल प्रतियोगिता २०७५ हुने भएको छ ।